सहकारीबाट ऋण लिदै हुनुहुन्छ ?, पहिला व्यवस्थापक वा अध्यक्षलाई यी प्रश्न सोध्नुस् ! | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] सहकारीबाट ऋण लिदै हुनुहुन्छ ?, पहिला व्यवस्थापक वा अध्यक्षलाई यी प्रश्न सोध्नुस् !
ऋण दिने संस्था लाई सोध्ने प्रश्नहरु:
तपाईले ऋण लिन लाग्नु भएको संस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हो कि होइन ?
ऋण लिन कति समय लाग्छ?
ऋण लिन के के कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ?/ के के कागजपत्रहरु चाहिन्छ?
तपाइले ऋण बापत तिर्नु पर्ने ब्याजदर कति हो ? र यो फेरबदल हुन्छ कि हुदैन?
साँवा र ब्याज बाहेक अन्य सेवा शुल्कहरु तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?/पर्छ भने कति तिर्नु पर्छ ?
कति र के सम्पत्ति, धनीपुर्जा, सुनचाँदी आदि धितो राख्नु पर्छ ?
ऋण कति किस्तामा र एक पटकमा कति रुपैया गरि कहिलेसम्म तिर्नु पर्छ ?
ऋण तिर्न सकेन भने कस्तो सजाय/जरिवाना हुन्छ ?
महत्वपूर्ण कुरा: ऋण लिने अन्तिम निर्णय गर्नु भन्दा अघि दुई वा सो भन्दा बढी संस्थाहरुलाई यी प्रश्नहरु सोधि एक आपसमा तुलना गर्दा अझ राम्रो हुन्छ।